Mustaqbalka Somaliland..W/Q W.Q Axmed-xiis Dharbaan – somalilandtoday.com
Sannadkan aynu joogno, mawduuca ugu xasaasisan ee lagu falanqeeyo goobaha bulshadu ay ku kulantaa waa “Somaliland xaggee baa ay ku socotaa?”Mawduucani waa mid u baahan si dhexdhexaad ah in loo dul joogsado. Waa dal ama dal doonayey in uu gaarkiisa isu maamulo halka uu ku dambayn doono? Hubaal waxa ah “halkee baa ay Somaliland ku sooctaa?” maanta in ay tahay dood lagu galayo Xabsi, haddii su’aashaa meel fagaare ah lagu soo bandhigo.
Dad badan oo Somaliland u dhashay ayaa qaba: Maanta haddii afti laga qaadi lahaa shacabka ku nool Somaliland in dadka intiisa badani ay u coddayn lahayeen “Markale iyo Midnimo!” Sababta natiijadaa keenaysaa maaha hilow loo qabo Xamar balse, waa nacayb loo qabo Madaxtooyadda Hargaysa. Waa kalsooni xumo ay abuureen labadii xukumaddood ee ka dhashay Kulmiye.
Somaaliya wajigaa ay gashay, gadhwadeen waxa ka ah – sida illo xoggogaal ah aan ka helayo waddanka Maraykanka – dabcan waddamada la isku yidhaa “non-traditionan” ee ay ku jiraan: Turkey, Qatar iyo waddamo kale-ba, darafka ayaa ay ka haystaan isbedelka Soomaaliya. Waxaa se aad moodaa boqortooyada Britain oo muddo dheer hor boodi jirtay siyaasadda Somaliya, hadda in loo riixay dhanka Bay iyo Bakool. Waddamada waagii hore sida weyn siyaasadda Somalia ugu lug lahaa ee hadda iyaga la bara bixiyey waxa ugu horeeya: Italy iyo Masar.
IMF, Bangiga Adduunka iyo Midawga Yurub ayaa dhammaan u muuqda kuwo hadda ka xiiso dhacay Somaliland, waxaana cadayn kugu fillan deeqda gaadhaysa $120M ee Bangiga Adduunku usii deyn rabo maamulada ka jira Konfurta Soomaalia – deeqdaa Hargaysa waa ay ka qaday. Dadka qaar waa ay isdiidsiin karaan saamaynta lacagtaasi iyo deeqaha kale ay ku yeelan karaan horumarka Soomaaliya lakiin, midhka marnaba dadkaasi aysan qarin karin waa “aaminaad ka baxa” ka dhex qarxay shacabka Somaliland. Shacabka Somaliland ayaa sida uu Muuse Biixi ka sheegay dhawr sanno ka hor magaalada London lumiyey kalsoonidii ka dhex jirtay dhexdooda!
Mareykan iyo IIraan: Laba abeeso ee dhiiggayg jaqaayey, maanta ma is cunayaan? (WQ: Dr. Abdulqani Hussein Badder)
Mareykan iyo IIraan Laba abeeso ee dhiiggayg jaqaayey, maanta ma is cunayaan? Labadii u heshiiyey burburinta...